Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!! | AASraw
/Blog/I-Methenolone Enanthate/Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!!
ezaposwa ngomhla 01 / 31 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Methenolone Enanthate.
Yintoni i-Methenolone Enanthate?
I-methenolone enanthate, i-aslo yazi njenge-Primobolan Depot, i-Primobolan.is inguqu ye-injection ye-steroid I-methenolone. Ngenye ye i-anabolic steroids esebenzayo phakathi abanxibe impahlaI-anabolic androgenic steroid ibhetele ngokubhekiselele njenge-anabolic esebenza ixesha elide ebonakalayo kwiimpawu eziphantsi ze-androgenic.
I-Primobolan isetyenziswa ngabantu abafuna ukugcina i-estrogen kunye nemiphumo echaphazelekayo kunye ne-androgenic. I-Primobolan yinto ekhethekileyo yokukhethwa kwezijikelezo ngenxa yeempawu zayo ezincinci ezinokuthi zilungele ukugcina izicubu zomzimba phantsi kwexesha elidityanisiweyo lokutya. Ukugqithiseleka kwamanzi angaphantsi kwamanzi akuyi kuba yinkxalabo ngenxa yokuba i-primobolan iyinxalenye ye-steroid engeyona i-aromatisation. I-compound ingenakongezwa kwimijikelezo yokubhengeza ukuphakamisa uhlobo lwe-anabolic lo mjikelo ngeli xesha ukunciphisa ukongezwa kwe-estrogen jikelele kunye nemiphumo ye-androgenic. Enye yeenzuzo ezinkulu ezinxulumene ne-methenolone enanthate yinyaniso ukuba le steroid ayiguquki kwi-estrogen njengenye i-steroid efumaneka kwi-DHT. Ukusetyenziswa kwale steroid ayinakunxulumaniswa nokunambitheka. Oku kuthetha ukuba abagijimi kunye nabakhi bomzimba akufanele babhekane nemiphumo yecaladi ye-steroid njengokulahlekelwa kweenwele, isikhumba seoli, i-acne, i-gynecomastia, kunye ne-bloating.
I-methenolone enanthate I-Powder i-raw material ye-Methenolone enanthate, ininzi inkampani inqwenela Thenga i-Methenolone enanthate Powder online, ngakumbi ukuhlambuluka I-Methenolone enanthate Powder, ukwenza i-Methenolone enanthate izidakamizwa.Ngokweentengiso ezininzi, ukuxhamla kwe-primo E kwi-AAS nkampani ebomvu yi-98%, yintoni abantu abaninzi bathenga i-Methenolone enanthate Powder ukusuka AAS.
I-methenolone enanthate Inkcazo yeePowder:
Igama: I-Methenolone Enanthate powder / primo E
Ukufunwa: I-White okanye icime, i-white powder okanye i-crystalline powder elula
Ubungqineko: Ukungenawo amanzi kumanzi okanye utywala, utyumle kwi-Acetic acid, i-ethyl ester
Ukulahleka ekumiseni: ≤0.5%
Uninzi oluMandla: ≤10ppm
Ixesha elimisiweyo: ii-20 minites
I-Methenolone Inanthate powder benefits
I-Methenolone Inanthate enqabileyo njengenye yezonabolic steroid ezinamandla kunabo bonke, inezinzuzo ezifanelekileyo zokwakha umzimba: I-Muscle izuza; ukulahlekelwa kweoli; Ukwandisa ijubane, njalo njalo ... I-Primobolan ibe yi-DHT-derivative, inayo iipropati ezifanayo zehomoni yomzali wayo. Umzekelo wayo awunakunqunyulwa yi-enzyme ye-aromatase kwi-Estrogen nayiphi na idosi. Ngoko ke, nabani na abafuna ukuwusebenzisa akufanele bafumane nayiphi na imiphumo echaphazelekayo ye-Estrogen ekusebenziseni yodwa. Oku kuthetha ukuba kuphephe ngokupheleleyo ukuba kunokwenzeka nayiphi na imiphumela echaphazelekayo: ukugcinwa kwamanzi kunye nokuqhaqha, ukunyuswa kwengcinezelo yegazi (ngenxa yokugcinwa kwamanzi), ukufumana ifuthe / ukugcinwa kwamafutha kunye ne-gynecomastia. Ngaphandle kobuqili kunye nokubukeka okubukeka kunobunono be-anabolic steroids kubonelela ngomzimba, i-Primobolan ithathwa ngabaninzi bezakhiwo zomzimba kunye nabagijimi njengento ekhethiweyo yokunciphisa inxaxheba ibonwa njengeluncedo kakhulu kwimigudu yokuphambili kwintsebenzo kunye nokulahlekelwa kwamafutha kunye nezigaba zokusika.
I-Aslo kufuneka uqaphele ukuba, ngenxa yokulinganiswa kwamandla e-anabolic ahluphekileyo okwenza ibe ngaphantsi kwamandla ngaphezu kweTestosterone, i-Primobolan ayikhethwanga ngabadlali okanye i-bodybuilders yokujikeleza ukujikeleza, imijikelezo yesigxina, okanye nayiphi na inzuzo yokulinganisa. I-Primo ifanelekileyo idibaniswe kunye (ihlanganiswe nayo) nezinye i-anabolic steroids ngokunjalo, nokuba ingawusebenzisa umjikelezo wokusika okanye ukujikeleza okanye ukujikeleza komzimba. Ukusetyenziswa kwe-Primobolan ngasese ngokwabo kuthathwa ngabaninzi njengendlela engento engenamsebenzi, kwaye kunye nale migca efanayo, abaninzi abasebenzisi be-anabolic steroid bathi i-Primo iluncedo kuphela kumanani aphakamileyo kakhulu, okungenakusebenza ngokubhekiselele kwiindleko eziphezulu le anabolic steroid. Olu lwazi lwe-dosing luya kwandiswa kwinqanaba lezithengiso kule projekthi.
I-Methenolone Inanthate Administration powder
Xa kubakho ukuphucula umzimba, i-athletics, kunye nokuphuculiswa komsebenzi, i-primobolan doers yokuqala yefomathi ye-injection iyaqala malunga ne-400mg ngeveki. Amapayipi aphakathi kwe-Primobolan aqhelekileyo kwi-400 - 700mg ngeveki, ekufuneka yanele ngokwaneleyo.
Abasebenzisi abathuthukisayo bangase baqhube njenge-800 - 1,000mg ngeveki. Ama-Primobolan ama-dosage ngokwemigaqo yokhuseleko kunye nokusetyenziswa okuncinci kudla ngokubanzi kwi-50 - 100mg ngeveki. I-Primo engenayo ifumaneka isetyenziswe ngokuthe gqithwa kakhulu ngamabhinqa kunokuba uguquko lomlomo, luhlobo olukhethiweyo.
Kwimeko yokwelapha, ama-standard ye-Primobolan Depot amanani awela kwi-100-200mg ngeveki nganye. Xa isetyenziswe ngamayeza, i-Primobolan Depot iisazi ziqala ngo-200mg ngeveki kwaye zinciphisa kwiiveki ze-100mg emva kwexesha elide lidlule. I-100mg nganye ngeveki ngokuqhubekayo iqhubela ixesha elifanelekileyo, kodwa kwezinye iimeko zancitshiswa zibe yi-100mg nganye iveki ezimbini. I-Primobolan Depot iye yaphumelela kakhulu ekuphatheni i-osteoporosis, i-sarcopenia kunye nesisundu esipheleleyo sokuchitha izifo okanye iimeko. I-horhenone ye-Methenolone iye yafumana impumelelo enkulu ekuphatheni ixesha elide kunye ne-corticosteroids kwaye iphumelele ekuphatheni i-carcinoma kunye ne-hepatitis. Kwimeko yokusebenza, i-Primobolan Depot iilayithwa ziyahlukahluka ngokuxhomekeke kwinkqubo yokusetyenziswa kunye namava kunye neminqweno yomntu. I-200-300mg nganye ngeveki iya kunika ukukhuselwa kwinqanaba ngexesha lokusika okanye lokutya, kodwa ezi ziphantsi kwee-Primobolan Depot. Nangona kunjalo, kufuneka baxhaswe kakhulu ngabantu abaninzi. Amadoda amaninzi aya kufumana amanani e-Primobolan Depot kwi-400-500mg nganye ngeeveki ukuba iphumelele ngakumbi, ivelise iziphumo eziqinileyo kwaye isele ibe kwindawo yokunyamezela. Enyanisweni, abaninzi abantu banokunyamezela i-600mg ngeveki yale steroid. Amanye amadoda aya kuzama i-Primobolan Depot kwii-600mg ngeveki, izicwangciso ezinjalo aziqhelekanga kodwa ziyakwandisa amathuba okuba nemiphumo emibi kakhulu, ingakumbi leyo ye-androgenic.
I-Methenolone Inanthate effect effects effects
I-Primobolan inomdla kakhulu xa kufikelele kwimiphumo emibi, eyenza ibe yi-AAS engummangaliso ukuxakisha namanye amaqhinga anzima. Kanye njengama-hormone onke, umphumo ophezulu wecala lokususwa kwe testosterone. Ngoko ke, unyango lwezithuba zomsebenzi kufuneka luphunyezwe. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo, ezifana nokulahleka kweenwele ngenxa yeempawu zayo ze-DHT, zinokwenzeka.
Ukuba u-primo uxhatshazwa ngaphezu kwegram (i-1000mgs) ngeveki, amacala amaninzi (umxube wombutho ngomzekelo) uya kwenzeka. Kuyizidenge ukucinga ukuba ngenxa yokuba i-primobolan ithathwa ngokuba 'ibuthathaka' akufanele ihlonishwe. Khumbula, kuseyi-stteroid enamandla kwaye kufuneka iqhutywe ngokuchanekileyo ngesicwangciso esihle.
I-Methenolone Inanthate price price
Ngokutsho koPhando lwe-Primobolan, sisazi ngakumbi ngexabiso le-Primobolan, Nangona kunjalo, amaxabiso ngokubanzi asemhlabeni kule miqolo elandelayo. Ekupheleni kwexabiso elibizayo, i-injection Primobolan inokuqala ukusuka kwi-$ 200-$ 230 nge-10ml isibhakabhaka esilungiswe kwi-100mg / ml ye-UGL umkhiqizo, ngelixa umkhiqizo wezobisi uphezulu njenge $ 20 - $ 25 enye ye-1ml ye-glass ampule elele 100mg / ml. Kwiphepha elingaphantsi, umntu unokufumana i-UGL ibanga elingenayo i-Primobolan ye-$ 90-$ 130 nge-10ml ye-flaal evezwe kwi-100mg / ml, kwaye imveliso yeyeza i-$ 12 - $ 18 enye ye-1ml ye-glass ampoule evezwe kwi-100mg / ml.
Thelekisa neziyobisi ze-Primobolan, i-Primobolan powder yindleko-eyiyo.price ye-Primobolan powder kwi-AAS yi-USD360 / 10g.Ya, yintoni inzuzo!
Indlela yokuthenga i-Methenolone Enanthate powder online?
Xa uthengela i-Methenolone Inanthate powder online, yebo, yi-Primobolan powder. Kulula ukuba ufumane ukuhlambuluka okuphantsi okanye u-Primobolan oyinyumba kuthengiswa, umthengisi uninzi uthi i-Pharmacy grade Primobolan sele ihamba, njengoko inqanaba elikhulu lezobisi elinoPramo likhishwe kwiimarike elidlulileyo , nakwihlabathi lonke. Kodwa ngokwenene ikhona. Ngoko ke, abo bajonge malunga nendlela yokuthenga ubungqina obuphezulu be-Primobolan, kufuneka bafumane ngenyameko. Kwaye i-AAS inika ithuba.
Indlela yokuyila i-Methenolone Enanthate powder evela kwi-AAS?
1.Visit iwebhusayithi ye-AAS, khetha imveliso oyifunayo, kwaye ushiye umnxeba wakho kunye nomyalezo kwi-AAS webhusayithi, uze ungenise, i-AAS's Customer Services iphendule kuwe kwiiyure ze-12 xa ufumene umyalezo wakho, uze uthethe ngeenkcukacha.
2.Thumela i-imeyli okanye uthumele imiyalezo kwi-whatsapp kubantu abasebenza kwi-AAS, njengeDemi, uEmily, Abby..ncokola ngentetho, malunga nokuhlanzeka, ubuninzi, Ukuthumela, idilesi, ukhethe intlawulo efanelekileyo, iimpahla zingathunyelwa kwiiyure ze-12 emva kokuhlawula, emva kokuhlawula, uya kufumana inamba yokulandelela, kwaye inkonzo ye-AAS yamakhasimende iya kugcina uyihlaziye ngexesha, ngoko kufuneka nje uhlale phantsi ngokukhawuleza, ulinde iplasela yakho.
I-3.AAS yinkampani e-china, Ukuze ukhuseleko, ukuba unomhlobo waseTshayina, unokwenza ukuba abahlobo bakho batyelele inkampani yabo, bathethe ngokucacileyo, kwaye ufumane iimpahla ozifunayo.
tags: I-Methenolone Inanthate powder
Umthombo wemvelo we-Orlistat powder ukulahleka kwesisindo-I-fat loss loss drug ifanele uyazi !!!	I-Methenolone Inanthate powder yokuthengisa: Izinto ze-4 zokusebenzisa i-Primo ngokuchanekileyo!